Yakachipa ODM / OEM Yakakwira mhando Bhakiti Elevator Vatengesi uye Fekitori YiZheng
Bhaketi erevheta ainyanya kushandiswa kutwasuka zvifambiso granular zvinhu
kunge nzungu, zvihwitsi, michero yakaomeswa, mupunga, nezvimwewo. Izvo zvakagadzirwa nesimbi isina tsvina
kuvakwa kwehutsanana, kumisikidzwa kwenguva refu, kukwirira kwakakwirira uye kugona kukuru kwekutakura.
Chii chinonzi Bucket Elevator inoshandiswa?
Maeleti ebhaketi inokwanisa kubata zvakasiyana siyana, uye nekudaro zvinoshandiswa mumaindasitiri mazhinji akasiyana uye nekushandisa, asi kazhinji, hazvina kukodzera kunyorova, zvinonamira zvinhu, kana zvigadzirwa zvine tambo kana zvinowanzoita mat kana agglomerate. Iwo anowanzo kuwanikwa mumagetsi magetsi, fetiraiza zvirimwa, pulp & mapepa ekugaya, uye simbi yekugadzira zvigadzirwa.
Dzino erevheta yebhaketi iri rakazvimiririra rakagadzirwa naYizheng uye inogadziriswa yekumisikidza yakanyanya kushandiswa kutwasuka kuenderera kuendesa kweupfu zvigadzirwa kana granular zvinhu. Iyo midziyo ndeye yakatwasuka dhizaini, compact dhizaini, yakanaka yekuisa chisimbiso mashandiro, kuiswa kuri nyore uye kugadzirisa, ichibvumira yakanaka uye inodzosera zvinhu zvekudya, pamwe nekuchinjika maitiro maitiro uye dhizaini.
Aya akateedzana emabhegi emagetsi anowanikwa mune yakananga coupling drive, sprocket inotyairwa kana giya rinodzora dhiraivha, kuendesa yakatwasuka chimiro uye kurongeka kuri nyore. Iyo yekumusoro kukwirira ndeyekusarudza, asi iyo yepamusoro kukwirira erevheta isingapfuure makumi mana.
Kubatsira kweBucket Elevator
* 90-degree kuendesa
* Stainless simbi yekuonana zvikamu
* Kuchengetedza chishandiso-kushoma kubviswa kwemabhaketi
* Otomatiki mira & tanga sensor kutonga nekuzadza kubva hopper kana kuyera
* Nyore kushandisa & nyore kuchenesa
* Caster yekumira nyore
* Wide mhando dzesarudzo dzinosanganisira indexing, feeders, mabutiro, akawanda madhiri nzvimbo, nezvimwe.
Bhaketi erevheta Vhidhiyo Ratidza
Bhaketi Elevator Model Sarudzo
Kuendesa Kugona (m³ / h）
Hopper Vhoriyamu （L）
Hopper Kufamba Yekumhanya (m / s)
Kufambisa Rotating Speed ​​(r / min)
Pashure: Yakakura Angle Vertical Sidewall Belt Conveyor
Zvadaro: Otomatiki Dynamic Fertilizer Batching Machine